# SamsungGalaxyS8 # GalaxyS8 ၏တင်ဆက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ရယူပါ Androidsis
အံ့ဆဲဆဲချဉ်းကပ်နည်း Samsung Galaxy S8 နှင့် Samsung Galaxy S8 Plus တို့ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်, ကျနော်တို့ပြီးသားလက်တွေ့ကျကျအရာအားလုံးကိုသိသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့တရားဝင်တင်ဆက်မှုမစတင်မီကြီးမားသောပန်းသီး၏မြို့တော်မှဖြစ်သည်။ သူသည်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအက်ပဲကိုကိုးကားရန်မလိုအပ်ဘဲရော၊ မပါ ၀ င်ပါကကောမည်သို့ရှိသနည်း။
နှစ်ရက်နှင့်တစ်နာရီ၊ အထူးသဖြင့်နောက်တစ်ရက်တွင်ဖြစ်သည် 29 p.m. စပိန်အချိန်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မတ်လ 17Samsung သည်၎င်းပါတီနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်တွင်နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက Android ပါတီဖြစ်သည်။ Android operating system ပါရှိသည့် terminal ၏အသုံးအများဆုံး terminal ဖြစ်သည်။
ဒီ post ရဲ့နောက်မှာသင် access လုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုရှင်းပြပါမယ် Samsung Galaxy S8 တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်သင့်အား stream ည့်ခန်းရှိဆိုဖာများ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှု မှနေ၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ Android ၏အရေးကြီးဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်သည့်ဤကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောတင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်ကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1 သီးသန့် Samsung UNPACKED 2017 application ဖြင့်သင်၏ Android tablet သို့မဟုတ် Smartphone မှမြင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
2 Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
သီးသန့် Samsung UNPACKED 2017 application ဖြင့်သင်၏ Android tablet သို့မဟုတ် Smartphone မှမြင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
အသေးစိတ်ကိုလက်လွတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း 8:29 p.m. စပိန်အချိန်လာမည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 17 ဘို့စီစဉ်ထားသည့် Samsung Galaxy SXNUMX ၏တင်ပြချက်ဤအပလီကေးရှင်းကိုကိုရီးယားနိုင်ငံစုံမှဖန်တီးပြီးဒေါင်းလုပ်ချခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်၎င်းသည်သင့်အနေဖြင့်ယခုနှစ်၏အရေးကြီးဆုံး Android terminal ၏တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်သို့သွားရန်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဖိတ်ကြားခြင်းကိုပေးသည်။ Google ၏တရား ၀ င်တင်ဆက်မှုနှင့်၎င်း၏ Pixel ဆိပ်ကမ်းများ၏ရှေ့တွင်ပင်အမှန်တရားသည် Google အရွယ်အစားရှိကုမ္ပဏီအတွက်အနည်းငယ်နာကျင်ပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤ link မှအောက်သို့ချန်ထားခဲ့သည့်ဤ link မှသင့်အားလုံးဝအခမဲ့ download ရယူနိုင်မည်၊ မည်သို့မည်ပုံလျှောက်ထားနိုင်မည်နည်း 2017 မဖြည့်ပါ
သင့်မှာ Android terminal မရှိဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုရင် တရားဝင် Galaxy S8 နှင့် Samsung Galaxy S8 Plus တို့ကိုတရားဝင်တင်ဆက်, သင်မမျှော်လင့်သောကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Samsung Galaxy S8 ၏တင်ဆက်မှုကိုဤအဖြစ်အပျက်မှကြည့်ရှုရန် You Tube ရှိ Samsung channel ကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့ Samsung Mobile ၏တရားဝင်ချန်နယ်မှဗီဒီယိုလွှင့်ထုတ်သည်.
ငါသည်ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်မှာသင်တို့ကိုငါစွန့်ပစ်သောဗီဒီယို, post ကို၏အစအ ဦး ၌, စပိန်အချိန် 29:17 pm မှာလာမည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ XNUMX ပေးလိမ့်မည်ဟုတ ဦး တည်းလိမ့်မည်။ Samsung Galaxy S8 အသစ်၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ဖြစ်ရပ်များကိုတင်ဆက်ရန် ဦး စားပေး ၀ င်ရောက်ခြင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ New York City မှ Samsung Galaxy S8 Plus နှင့်။
ယခုတွင်ငါသည်သင်၏နှုတ်ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါငါစားပွဲနှင့်အတူသင်တို့ကိုစွန့်ခွာ လက်တွေ့ကျကျအတည်ပြုပြီးသော Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ.
Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံး၏ဤနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည်နောက်ဆုံးတွင်မှန်မမှန်၊ သို့မဟုတ်သေးငယ်သည့်အရာတစ်ခုပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိမရှိသိရန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။ နောက်ဆုံးမိနစ်သည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်လျှင်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေသည်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်သည် လက်ဗွေဖတ်စက်သည်ရှေ့မှောက်နောက်ဖက်သို့သွားလိမ့်မည်၎င်းသည် Galaxy S6 (သို့) Note5မှ Samsung Galaxy ၏အမှတ်အသားဖြစ်သောကြောင့်စကားပြောရန်အသင့်ဖြစ်နေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » # SamsungGalaxyS8 # GalaxyS8 ၏တင်ဆက်မှုကို Live